News 18 Nepal || चितवनमा कोरोना संक्रमित पुरुषको निधन, कस्तो थियो उनको अवस्था ?
चितवनमा कोरोना संक्रमित पुरुषको निधन, कस्तो थियो उनको अवस्था ?
काठमाडौं । चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा एक कोरोना संक्रमितको निधन भएको छ । ज्यान जानेमा गैँडाकोट नगरपालिका–९ बस्ने ६२ वर्षीया वृद्धा रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
ज्वरो, खोकी र श्वासप्रश्वासमा समस्या आई भदौ १५ गते अस्पतालमा भर्ना भएकी उनमा १७ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । संक्रमण देखिएसँगै कोभिड सघन उपचार कक्षमा उपचारका क्रममा उनको आइतबार राति ११: ३० मा ज्यान गएको अस्पतालका निर्देशक डा दयाराम लम्सालले जानकारी दिए ।
हालसम्म जिल्लाका अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान जानेको संख्या २७ पुगेको छ । दुई वृद्धाको घरमै ज्यान गएको थियो । चितवनका १७, मकवानपुरका पाँच, नवलपरासी सुस्ता पूर्वका चार, बारा, गोरखा र कैलालीका एक एक जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको हो । रासस